Puntland oo beenisay in Shabaab la wareegeen dhul ka tirsan Gobolka Sanaag – AfmoNews
Puntland oo beenisay in Shabaab la wareegeen dhul ka tirsan Gobolka Sanaag
Puntland ayaa si adag u beenisay in Ururka Al Shabaab uu la wareegay deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag, gaar ahaan qaybta ay ka arrimiso Puntland.
Al Shabaab ayaa maanta sheegatay inay la wareegtay deegaanada Mirici, Masha-caleed, Xabaasha Aw-Cali iyo Markeet, oo ku yaala inta u dhaxeysa Degmooyinka Laasqoray iyo Badhan.
General Cabdullaahi Cumar Canshuur, Taliyaha Ciidamada Puntland ee aagga Gobolka Sanaag ayaa sheegay in Shabaabku qaab dhuumaaleysi ah ku jooggaan Gobolka Sanaag, balse aysan jirin meel ay si rasmi ah uga hawlgalaan.
“Dad dhuumaaleysanayo weeye ee waxay qabsadeen iyo meel ay haystaan, midna ma jirto.” Ayuu yiri Taliyaha oo la hadlay Laanta afka Somaliga ee BBC.
“Al Shabaab waa dad fitno-wadayaal oo shar-wadayaal ah oo umadda dilaya, meel kastana dhuumasho iyo wax lamida ayay ku taggaan, laakiin meel ay fariisin ku leeyihiin hadda oo Gobolka Sanaag ah ma jirto.” Ayuu yiri General Canshuur.
Marka laga soo taggo beeninta Puntland iyo sheegashada Al Shabaab, ee ah inay la wareegtay deegaano ka tirsan Gobolka Sanaag ayaa waxaan jirin ilo madaxbannaan oo arrintaasi xaqiijin kara.